Vaovao - Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny varavarankely fitaratra, ny varavarankely mivoha sy mivadika ao anatiny, ary ny varavarankely misokatra ivelany sy mihidy ambony?
Inona avy ireo tombony azo avy amin'ny varavarankely fitehirizana, ny varavarankely mivoha sy mivadika ao anatiny, ary ny varavarankely misokatra ivelany sy mihidy ambony?
Ny varavarankely dia fantsom-panazavana ny rivotra sy ny jiro ao amin'ny efitranontsika. Noho izany, mila miasa bebe kokoa amin'ny fisafidianana varavarankely isika. Anio, hasehonay anao ny tombony amin'ny varavarankely mihantona, ny varavarankely misokatra anatiny, ary ny varavarankely mihantona ivelany.
Rivotra tsara, fiaramanidina tsara, ins insulateur, fitehirizana ny hafanana ary tsy fahaleovan-tena. Ny varavarankely manokatra anatiny dia mety amin'ny fanadiovana, fa hipetraka amin'ny ampahany amin'ny efitrano izy ireo rehefa nosokafana anatiny; izay misokatra ety ivelany dia tsy mandray toerana rehefa nosokafana, fa ny any ivelany kosa dia misy faritra be rivotra. Amin'ny toerana sasany, fady ny mametraka varavarankely manokatra eo ivelany.
Sokafy ny anatiny ary midina ao anatiny:
Izy io dia endrika vaovao novolavolaina tamin'ny alàlan'ny varavarankely fitehirizana. Azo sokafana amin'ny fomba roa izy io, na ny mitsivalana na ny mivadika (ny faritra ambony amin'ny fantsom-baravarankely dia mirona mankany anatiny). Rehefa avadika dia afaka mivoha ny elanelana manodidina ny folo santimetatra, izany hoe azo sokafana kely avy eo ambony ny varavarankely, ary ny ampahany misokatra dia azo haato amin'ny rivotra ary hamboarina miaraka amin'ny zana-kazo amin'ny alàlan'ny savily. Ny tombony dia: azo entina amin'ny rivotra izy io, nefa azo antoka ihany koa ny fiarovana azy, noho ny savily, ny varavarankely dia tsy afaka manokatra seam sentimetatra fotsiny, tsy afaka manatratra avy any ivelany, indrindra mety ampiasaina rehefa tsy misy olona ao an-trano.
Tombony amin'ny varavarankely mivadika:
1. Tsy mila toerana an-trano izy io rehefa avadika. Ny lambam-baravarana dia azo sokafana ary akatona malalaka.
2. Afaka milalao malalaka ny ankizy rehefa any ambany. Azonao atao ihany koa ny manadio ny efitrano nefa tsy manahy ny amin'ny hikapoka ny lohanao na ny vatanao eo an-joron'ny varavarankely.
3. Ireo ankizy izay milalao sy miakatra eo am-baravarankely dia tsy hatahorana hianjera avy eo am-baravarankely.
4. Rehefa latsaka ao anaty ianao dia akatony ao an-trano fotsiny ny varavarankely alohan'ny hanokafany azy amin'ny fisokafan'ny fisaka, ka tsy tokony hatahotra ianao sao hiditra ao amin'ny efitrano amin'ny alàlan'ny varavarankely ny mpangalatra. Azonao atao ny manokatra ny hanger ambony rehefa mivoaka hitandrina ny rivotra anaty trano ianao amin'ny fotoana rehetra.
5. Rivotra voajanahary ny efitrano rehefa avadika. Ny rivotra mitsoka avy eo amin'ny sisin'ny varavarankely, tsy mivantana amin'ny vatana, mahatonga anao hahazo aina kokoa.
6. Rehefa misy tsio-drivotra kely sy orana mivaivay dia tsy mahazo mipetaka amin'ny vera fotsiny ny ranonorana fa tsy miditra amin'ny efitrano. Fampahatsiahivana am-pitiavana: Akatona ny varavarankely rehefa misy rivotra mahery sy oram-be!
sokafy ivelany ny varavarankely mihantona ambony
Ny varavarankely misokatra ambony ery ivelany dia mihazakazaka amin'ny alàlan'ny alàlan'ny fikandrana ny fikandrana fikandrana mba hampandehanana ny fihetsiky ny mpikatroka fitaovana, mba hahafahan'ny varavarankely misokatra mitsivalana na mihodina ao anaty efitrano hanokafana zoro iray amin'ny rivotra. Amin'ny alàlan'ny fihodinana ny kofehin'ny varavarankely, ny mekanisma fampifangaroana ao anaty varavarankely dia entina, ka mihidy ny varavarankely (tantanana midina mankany ambany), sokafana misokatra (tantanana marindrano), ary mihantona (tantanana miakatra ambony). Tsy misy fiantraikany amin'ny habaka anaty izany ary matetika ampiasaina matetika; afaka mamaha amin'ny fomba mahomby ny olan'ny fanoherana halatra izany, ary azo antoka ny fisokafana rehefa tsy misy olona ao anaty trano na amin'ny alina.
Endri-javatra amin'ny fikandrana mihantona ambony misokatra ivelany:
1. Ventilation Satria ny toerana mivadika dia fomba iray hafa hanokafana ny varavarankely mihantona ambony ety ivelany, mamela ny efitrano hivezivezy voajanahary amin'ny rivotra voajanahary, ary madio ny rivotra anatiny, sady manala ny mety hisian'ny ranon'orana miditra ao amin'ilay efitrano. Ny rivotra madio dia tsy isalasalana fa hamorona tontolo iainana milamina ho an'ny olona.
2. Fiarovana Ny fitaovana fampifandraisana namboarina manodidina ny fikandrana am-baravarankely sy ireo fiasa isan-karazany amin'ny tahony amin'ny fizahana ao anaty. Rehefa mikatona ny fikandrana varavarankely dia miorina amin'ny sisin'ny varavarankely ny manodidina, noho izany dia tena tsara ny fiarovana sy ny fanoherana ny halatra.
3. Mora ny manadio ny windows. Ny fandidiana tsotra sy ny kofehy mifamatotra dia mety hahatonga ny fikandrana hidina ao anaty trano. Mety sy azo antoka ny manadio ny ivelan'ny varavarankely.
4. Practicability Manalavitra ny fibodoana ny habaka anaty rehefa misokatra ny varavarankely anatiny, ary tsy maninona ny manantona ambainy sy mametraka ny lalamby mitaona.
5. Fahombiazana tsara fitehirizana tombo-kase sy fitehirizana hafanana Amin'ny alàlan'ny fanidiana maro manodidina ny fikandrana am-baravarankely, azo antoka ny fiantraikan'ny famehezana sy ny fitahirizana ny varavarana sy ny varavarankely.
Betsaka ny tombony azo amin'ny fisokafan'ny varavarana mihidy ambony, ny fandidiana tsotra ary ny fahaizana avo lenta, izay mampitombo be ny fahafinaretan'ny mpanjifa.